Ukusuka kubenzi beFantastical, kuza iCartshop yoLawulo loQhakamshelwano | Ndisuka mac
Isimanga sisicelo esiguqula ulawulo lwekhalenda ikakhulu ngenxa yolawulo lwayo olukrelekrele. Ngoku, iqela elinye labaphuhlisi lenze Ikhadi lekhadiYenzelwe abo basebenzisi abaphatha inani elikhulu labafowunelwa yonke imihla, kokubini xa bengena kwinkqubo, kunye nokubalawula. Esi sicelo songeza impefumlo womoya omtsha kwisicelo soqhakamshelwano lweMacOS, esisasebenza ngokulula, kodwa kwangaxeshanye sikucela entsha imisebenzi smart mababuyele kwinqanaba elifaneleyo.
Ngokukodwa iCardshop igqwesa ekulawuleni ulwazi ngobukrelekrele. Njengokusebenza kweFantastical, iyakwazi uku-odola ulwazi olungcolileyo. Umzekelo, ukuba sibhala okanye sikopa kwaye sincamathisela ukusayina kwe-imeyile: UJosé Lopez Martinez umnxeba 123456789 kunye neselfowuni 987654321 test@prnza.com, ICardshop iyakwazi ukuhlela lonke olo lwazi kunye nokwenza unxibelelwano nayo.
Kodwa iimpawu zayo ezintle aziyeki apho: sinako fumana abafowunelwa kwaye wenze nabo. Sinokukubuza: I-imeyile kaJorge Martinez kunye neCardhop baya kujonga umnxeba kaJorge Martínez kwaye baya kusibonisa idilesi ye-imeyile kuphela. Sinokucela lonke ulwazi lokunxibelelana, ukukhetha ukuba unxibelelana njani naye. Emva kokuba nayo kwiscreen, siya kucofa iqhosha elinomdla kuthi, kuxhomekeke kwindlela esifuna ukunxibelelana ngayo nefowuni, i-imeyile, iFaceTime, njl. Ukuba yinyani, le yokugqibela iyenziwa ngoQhakamshelwano lweMacOS. Kodwa ICardshop nayo ingathumela i-tweet ukunxibelelana okanye ukukunika umkhombandlela wokukhangela kwidilesi yabo.
Singazenza ezi zenzo ngokusetyenziswa kwendalo kweMacOS. Umzekelo, ukuba sikuxelela ukuba unxibelelane nevidiyo, ngokungagqibekanga iya kuvula i-FaceTime. Nangona kunjalo, kuqwalaselo Singakuxelela ukuba wenze isenzo nge-skype okanye esinye isicelo sokwenza oko.
Ukulandelelana kwabafowunelwa yenye ingongoma eyomeleleyo. Ukongeza koku-odola ngokwe-alfabhethi, sinokuyihlela ngemihla yokuzalwa ezayo, abafowunelwa bokugqibela abongeziweyo okanye abo basetyenzisiweyo. Okokugqibela, inecandelo lamanqaku, elibonakala lonke ixesha sisebenzisana nomfowunelwa, ukusoloko sinolwazi ngokujonga nje.
Ukucwangciswa kojongano kuyacwangciseka, kubandakanya imowudi emnyama kwaye iphantse yabaluleka. Ikhadi lekhadi Iyafumaneka kwi Mac App Store ngesaphulelo sama-25%, ngexabiso le- € 16,99. Ayililo ixabiso eliphantsi, kodwa yonke into elungileyo inexabiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Ukusuka kubadali beFantastical, kuza iCartshop yolawulo loqhakamshelwano